Samsung Kies waa Samsung qalab aad u aasaasi ah lahaansho, knowhow ah kuwaas oo ay ku badbaadin karto badan oo dadka isticmaala Samsung badan oo ka kaaftoomi. Kies waa mid fudud in la isticmaalo, qoreysa interface ah oo quruxsan oo navigation guud codsiga waa wax fudud oo raaxo leh. Ilaalinta ee aragtida xaqiiqada ah in Kies caawimi karaan xalinta isku dhacyada ugu badan in user Samsung ah waxaa laga yaabaa in ay la kulmaan wax kasta oo hadda ka dibna, qodobkan qoreysa ah kooban oo weli wargelin ah ee Samsung Kies 2.6. Maqaalkani waxa ujeedadiisu on samaynta laylis ugu dadka isticmaala ee aqoon u leh Samsung Kies 2.6 si ay si fudud u isticmaali kartaa in dhibaato ay xallin iyadoo wax dhibaato ah.
Waa maxay Samsung Kies 2.6?
Samsung Kies 2.6 waa version weyn ee software kala iibsiga file u Samsung ah. Sida Kies 3, Kies 2.6 kaloo ka caawisaa dadka isticmaala cusboonaynta iyo dhibta ay firmware. Farqiga kaliya ee u dhaxeeya Kies 2.6 iyo 3 Sidaa darteed, waa in kasta oo ay taageertaa qalabka kala duwan. Kies 2.6 waddaa on qoraalkii ka weyn daaqadaha iyo taageero qalab ka weyn Samsung; kuwii laga bilaabay markii ay September 2013-Samsung Kies 2.6 waa software ah oo lacag la'aan ah kaas oo lagala soo bixi karaa website-ka rasmiga ah Samsung isticmaalaya link here .
Qalabka ay taageerayaan, qalabka Android Samsung ayaa la Android version 4.3 oo kor ku xusan
Software loo baahan yahay: Microsoft .net Framework SP1 v3.5 ama ka dib, Windows Media Player 11 ama ka dib DirectX v9.0 ama ka dib
Sida loo soo dejisan iyo rakibi Kies 2.6 on your computer
Samsung Kies 2.6 lagala soo bixi karaa link kor ku bixiyo. Furitaanka link la siiyo waxay keeni doontaa in bilaabidda ee download ee file Mudanayaasha. Marka download dhamaato, waxaad si fudud ku rakiban kartaa software ku saabsan laptop ama desktop adigoo raacaya tilmaamaha muuqda inta lagu jiro geedi socodka rakibo.
Sida loo isticmaalo Samsung Kies
Samsung Kies 2.6 waa software aad aasaasiga ah taas oo u sahashay in ay xitaa u isticmaalaan dadka isticmaala laylis. Interface waa is-sharaxaadda iyo navigation waa ka kaaftoomi lacag la'aan ah. Marka aad ku rakiban software on your computer ama laptop, waxaad arki doontaa daaqad la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey.
Waxaad si Samsung Kies 2.6 xidhan karto qalab aad by yahay cable USB ah halka xiriir ah wireless sidoo kale waxaa suuragal ah in qalabka taageera Kies via Wi-Fi. Bidix kooxda gacanta menu siinaysaa aragtida badan ah oo ka mid ah macluumaadka suurto gal dhammaan fursadaha la heli karo wareejinta. Waxaad riix kartaa mid kasta oo ka mid ah si aad u eegto waxyaabaha ku hoos yaala qaybta la doortay ee aad telefoonka. Waxaa markaas suurto gal ah in lagu wareejiyo si aad laptop ama computer iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Kies 2.6 sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si ay u hagaagsan xogta aad ee guud ahaan xisaabaadka kala duwan. Taas aawadeed, go fudud in tab ka calaamadeeyay "nidaameed". Si aad u hagaagsan aad xiriirka la leedahay, calaamadee sanduuqa u dhiganta "u hagaagsan marka aad la xiriirayso" oo ka soo hoos u soo dhaadhacay menu, dooro ikhtiyaarka aad ku doonay.
Mar kasta oo aad qalab aad ku xidhmaan Samsung Kies 2.6, waxa ay hubinaysaa haddii ay jirto casriyayn ah firmware diyaar u ah qalab aad. Haddii ay jirto, waxaa soo bandhigay fariin aad ka warrami in aad u cusboonaynta kartaa firmware. Waxaad riix kartaa "Hagaaji" button aad u bilowdo nidaamka upgradation ama waxaad riixi kartaa "Cancel" si uu uga fariin iska tag, waayo, mar.
S: Waxaan u isticmaali Kies 3 (Samsung S3) & Kies 2.6 (Note Samsung Galaxy 8.0). Ma u baahan tahay caawimaad si aad u aragto sida ay u sii heli karaa dhammaan macluumaadka aan labada aaladood qalab hor update si kala duwan Kies. Waa maxay barnaamijyadooda kale ayaan haatan isticmaali kartaa labada?
A: Isticmaal Wondershare MobileGo oo ku xidhi karaa qalabka kala duwan. Wondershare MobileGo uu awood u leeyahay in ay sii laba qalabka socda nooc oo kala duwan Kies synced mar walba aan sababaya maqal la'aan mid ka mid ah xogta.
Inkastoo Kies 2.6 waa software ah oo waxtar leh, waxay qarinayaan oo kaliya hawlaha aad u aasaasi ah oo sidaas daraaddeed, cadeeyn kara in uu baacsadaan yara oo loogu talagalay dadka kuwaas oo raadinaya shaqeynta dheeraad ah a. Maxaa yeelay, dhammaan dadka sida, Wondershare MobileGo waa ugu fiican Samsung Kies 2.6 kale sida ay ku aaddan tahay oo dhan functionalities aasaasiga ah gudahood Kies 2.6 halka bixinaya muuqaalada dheereeyey waqti isku mid ah. Marka laga functionalities ay bixiyaan Kies 2.6, Wondershare MobileGo yimaado buuxaan muuqaalada awood badan sida mid click gurmad iyo soo celiyo, awoodda Mirror qalab ah oo ku saabsan laptop ama desktop ah iyo qaar badan oo.
> Resource > Android > 6 Waxyaabaha ay tahay in aad Ogaato ku saabsan Samsung Kies 2.6